ပြုပြင်ခွင့်ပြုချက်များ OS X El Capitan ပျောက်ကွယ်သွားသည် ငါက Mac ပါ
ပြန်လည်ပြုပြင်ခွင့်ပြုမိန့် OS X 10.11 El Capitan တွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ကတူပုံရသည် ကိုယ်တိုင် disk disk ကိုပြုပြင် နေ့ရက်များကိုရေတွက်။ ရနိုင်သည်။ အနည်းဆုံး Apple X မှထုတ်လွှင့်ခဲ့သော OS X El Capitan ၏ developer များအတွက် beta version အသစ်၏မှတ်စုများတွင်သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည် disk ၏အမှားအယွင်းများနှင့်အမှားအယွင်းများကိုပြုပြင်ရန် (သို့) ဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ် ကြိုတင်၍ ရှောင်ရှားရန်ပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ OS X 10.11 El Capitan ရှိ Disk Utility ကိုကြည့်ပြီး၎င်းသည်ပြန်မလာနိုင်ဟုထင်လျှင် beta အသစ်တွင်ဤရွေးချယ်မှုပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ OS X El Capitan လည်ပတ်မှုစနစ်၏အသစ်ပြောင်းလဲမှုအသစ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်လိမ့်မည် အလိုအလျောက်ခွင့်ပြုချက်ပြုပြင် သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကြောင်းမှတ်စုတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်အရာဖြစ်တယ်။
သူတို့ကရှင်းပြသည်မှာ system file များမှခွင့်ပြုချက်များကိုအလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးသောကြောင့်ဤတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်း၊ သို့သော်၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်များကို Terminal မှရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ၊ ငါတို့မှာဒါမှမဟုတ် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ OS X Yosemite တွင်ရှိသည်.
OS X အသစ်အတွက်ဤအတိုင်းအတာကိုစေ့စပ်သေချာစွာပြုလုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည် အကြံပေးခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြောရရင်၊ ဒီစနစ်ကို update လုပ်မှသာဒီအလိုအလျောက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိသော်လည်းကျွန်တော့်ကိုအယုံအကြည်မရှိဘူး၊ အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ပြီးတိကျသောအခါသမယပါမစ်များ၌ပြုပြင်ရေးကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်တကယ်မလိုအပ်ဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » ပြန်လည်ပြုပြင်ခွင့်ပြုမိန့် OS X 10.11 El Capitan တွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်
Gustavo Maldonado လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ဒါက hackintosh ပြီးသွားပြီလား?
Gustavo Maldonado Lópezအားပြန်ပြောပါ
Mario A. Suarez ဟုသူကပြောသည်
mac ပေါ်မှာတောင်မှ terminal ကပိုပိုပြီး ဦး စားပေးလာတယ်
Mario A. Suárezအားပြန်ပြောပါ
Chrome browser သည်၎င်း၏နောက်ဆုံး beta version တွင်တိုးတက်သည်
Apple သည်ငွေချေးစာချုပ်ရောင်းချခြင်းမှဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်